म मेरा छोरा पुस्ताको सुन्दर भविश्यका लागि राजनीति गर्दैछु : डा.डेभिड
२०७९ बैशाख ३ गते २२:५१:०० मा प्रकाशित
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाको प्रमुखमा दाव गरेसंगै प्राज्ञिक छवि बनाएका डाक्टर डेभिड बस्यालको जिल्लामा व्यापक चर्चा चलेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र एमफिल , वेलायतबाट एमबीए र कोरियाबाट पीएचडी गरेका डा बस्यालले अमेरिका , वेलायत र कोरियाका विश्वविख्यात कलेजहरुबाट प्राध्यापनको राम्रो अवसर पाउँदा पनि ती अवसर त्यागेर सन्धिखर्क नगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिन पुगेका कारण पनि जिल्लामा उनको चर्चा सुरु भएको हो । प्रस्तुत छ -सन्धिखर्क नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसबाट दाबेदारी गरेको डा. बस्यालसंग खुलामञ्चका लागि राजेश थापाले गरेको छोटो संवाद :
शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकलाई पूर्ण सुविधा दिन सकियो भने अरु केही चाहिँदैन र मैले स्नातकोत्तर सम्मको शिक्षा पूर्ण नि:शुल्क र स्वस्थ्य उपचारको पूर्ण नि:शुल्क व्यवस्था गर्ने सपना बोकेको छु ।
एकाएक राजनीतिमा हामफाल्नु भयो किन ?
म अलिकति तपाईलाई यहाँनिर सच्चाउँछु । म राजनीतिमा एकाएक आएको होइन । मेरो परिवार राजनीतिक परिवार हो । मेरो पिताजी २०१७ सालको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागि भएकै कारण ७ वर्ष जेल जीवन विताए पछि पाल्पाको जेड तोडेर भाग्नुभएको थियो । यसैगरी मेरी माता पनि जिल्लाको प्रभावशाली नेत्री हुनुहुन्थयो । माता महिला संघ अर्घाखाँचीकी जिल्ला अध्यक्ष समेत बन्नु भयो ।
म विद्यालयकाल देखि नै राजनीतिमा सक्रिय छु । केही वर्ष अध्ययनका क्रममा अलि व्यस्त भए । व्यवसायीक जीवन सुरु भए पछि पनि मैले राजनीतिलाई निरन्तरता नै दिएको छु । म राजनीतिबाट कहिल्यै टाढा भइन ।
मेरो पिताजी २०१७ सालको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागि भएकै कारण ७ वर्ष जेल जीवन विताए पछि पाल्पाको जेड तोडेर भाग्नुभएको थियो । यसैगरी मेराी माता पनि जिल्लाको प्रभावशाली नेत्री हुनुहुन्थयो । माता महिला संघ अर्घाखाँचीकी जिल्ला अध्यक्ष समेत बन्नु भयो ।
तपाई बेलायत, कोरियाका विश्वविख्यात विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेको मान्छे । तपाईलाई विदेशमै पनि राम्रो अवसर थियो होला । के कारण राजनीतिको आकर्षणले तान्यो तपाईलाई ?
हो , मलाई वेलायत , अमेरिका र कोरियाका राम्रा विश्वविद्यालयहरुले प्रध्यापनका लागि अवसर दिइरहेका छन् ।१५ वर्ष बढी समय त्रिभुवन विश्वविद्यालय , काठमाडौं विश्वविद्यालय र पूर्वाअच्चल विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेको अनुभव पिन मसंग छ । यी सबै मेरा जीवनका मात्रै उपलब्धि हुन । म मेरो छोराको पुस्ताको भविश्यको सुनिश्चितता खोजिरहेको छ । राजनीतिलाई आलोचना मात्रै गरेर हुँदैन । यसका कमीकमजोरी हटाउन आफै लाग्नु पर्छ । म मेरा छोरा पुस्ताको सुन्दर भविश्यका लागि राजनीति गर्दैछु ।
सन्धिखर्क नगरपालिकाको प्रमुखमा दाव गर्नुको कारण के हो ?
मेरो जन्म थलो अर्घाखाँची , सन्धिखर्क नगरपालिकामा हो । अहिले मेरो राजनीतिक हैसियत भने कै यो नगरपालिकाको नेतृत्व गर्नका लागि मात्रै योग्य छ । मैले यही ठाउँमा विद्यार्थी राजनीति गरेर आफ्नो राजनीतिक परिचय पनि दिएको छु । मेरो क्षमताप्रति यस क्षेत्रका आदरणीय मतदाताहरु जानकार पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुको आग्रहका कारण मैले सन्धिखर्क नगरपालिकाको प्रमुखमा दावी गरेको हुँ ।
नगरपालिकाको विकासमा तपाईँको योजना के छ ?
हेर्नुस , मैले देशविदेशको राजनीतिक नेतृत्व र विकास देखेको छु । मैले एक्लै नेतृत्व गर्ने होइन । म त प्रतिचनिधिमात्रै हुँ । मसंग यस जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको ठूलो टिम हुनेछ । आज पनि त्यो टिम मसंग काम गरिरहेको छ । मैले त्यही टिमको सल्लाह अनुसार काम गर्ने हो । यस्तो परिपाटी नेपालमा छैन, भने पनि हुन्छ । मैले यस खालको अभ्यास राजनीतिमा गर्दैछु ।
राजनीतिलाई आलोचना मात्रै गरेर हुँदैन । यसका कमीकमजोरी हटाउन आफै लाग्नु पर्छ । म मेरा छोरा पुस्ताको सुन्दर भविश्यका लागि राजनीति गर्दैछु ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकलाई पूर्ण सुविधा दिन सकियो भने अरु केही चाहिँदैन र मैले स्नातकोत्तर सम्मको शिक्षा पूर्ण नि:शुल्क र स्वस्थ्य उपचारको पूर्ण नि:शुल्क व्यवस्था गर्ने सपना बोकेको छु । यो असम्भव पनि छैन । संगै सन्धिखर्क नगरपालिकामा स्थानीय तहका उद्योग ।कृषि उत्पादन र विक्रिवितरणमा नगरपालिकाको पूर्ण स्वामीत्व र रोजगारीको पूर्ण व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मैले यी काम गर्न सक्दा यो नगरपालिका नेपालकै नमूना नगरपालिका हुनेछ । साथै मेरो देशीविदेशी सम्बन्धलाई यो नगरपालिकाको विकासका लागि भरपुर प्रयोग गर्नेछु ।
मैले एक्लै नेतृत्व गर्ने होइन । म त प्रतिचनिधिमात्रै हुँ । मसंग यस जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको ठूलो टिम हुनेछ । आज पनि त्यो टिम मसंग काम गरिरहेको छ । मैले त्यही टिमको सल्लाह अनुसार काम गर्ने हो । यस्तो परिपाटी नेपालमा छैन, भने पनि हन्छ । मैले यस खालको अभ्यास राजनीतिमा गर्दैछु ।
मैले सन्धिखर्क नगरपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा आधुनिक र सुलभ सेवाका लागि काम गर्नेछु । गर्दा के हुन्न , भन्ने सोचबाट प्रेरित म शिक्षा र स्वास्थ्यमा यो नगरपालिकालाई नमूना बनाउने छु ।
नगरप्रमुखको टिकट पाउने कुरामा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
म शतप्रतिशत विश्वस्त छु । यस नगरपालिकाका १२ वटै वडाले मेरा नाममा सिफारिस गर्न तयार छन् । स्थानीय मतदाता मेरो दावीप्रति उत्साहित हुनुहुन्छ । म आज सम्म पार्टीको कुनै पदमा नपुगेको निष्कलंक भएका कारण पनि होला , मेराप्रतिको विश्वस अध्याधिक छ । मैले निकट नपाउनु भनेको मेरो लागि भन्दा पनि नगरपालिकाका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । म त पार्टीको सिपाही हुँ । आज टिकट नपाउँदा म निराश हुने छैन । तर स्थानीय मतदातामा नैराश्यता पक्कै छाउनेछ ।
Dammar kunwar लेख्नुहुन्छ (२०७९ बैशाख ४ आइतबार ९:०५ pm )